Umbuzo: Uwafudumeza Njani Amanzi Kwitanki yeentlanzi-Ukuhamba ngebhayisekile
Ikhaya » Zomxube » Umbuzo: Uwafudumeza njani Amanzi kwiTanki yeentlanzi
Kuthatha ixesha elingakanani ukuba amanzi etanki yentlanzi afudumale?
Ndingenza ntoni ukuba amanzi am e-aquarium ayabanda?
Ngaba uyakwazi ukwenza i-microwave yamanzi kwitanki yeentlanzi?
Ingaba itanki yamanzi abandayo kufuneka ibe yintoni ubushushu?
Ndingayigcina njani ishushu itanki yam ngaphandle kwesifudumezi?
Ingaba amanzi etanki yam yeentlanzi kufuneka azive eshushu?
Ndingasebenzisa ithemometha yenyama emanzini?
Ngaba amanzi anetyuwa angakwazi ukwenza i-microwave?
Uphefumla njani itanki yentlanzi ngaphandle kwempompo?
Ngaba ufuna isifudumezi kwiintlanzi zamanzi abandayo?
Ngaba iintlanzi ziyawathanda amanzi abandayo okanye ashushu?
Ngaba iintlanzi zasemanzini abandayo zifuna isibane?
Ingaba amanzi angama-85 aziva njani?
Ingaba iintlanzi zamanzi abandayo zihlala kwitanki yetropiki?
Ndibujonga njani ubushushu bam bamanzi e-aquarium?
Yeyiphi eyona ntlanzi ingcono kwitropiki okanye emanzini abandayo?
Ndiwalungisa njani amanzi etanki yam yentlanzi?
Kude kube nini phambi kokuba ubeke iintlanzi zamanzi abandayo kwitanki entsha?
Fudumeza amanzi etanki yakho ngokuthe ngcembe (isisombululo sexeshana). Kucetyiswa kuphela njengesisombululo sexeshana xa uzama ukugcina itanki yentlanzi ishushu ngaphandle kwesifudumezi. Ungawafudumeza kancinci amanzi kwitanki yakho ngokongeza ibhotile etywiniweyo ezaliswe ngamanzi ashushu kwi-aquarium yakho kwaye uyivumele ukuba idande ide iwugqibe umsebenzi wayo.
ingathatha phakathi kwe 24 kunye ne 48 iiyure kwaye ifike kumaqondo obushushu. Xa ndandijula ​​isifudumezi sam kwitanki yam (malunga neegaloni ezi-2, iilitha ezingama-20), kwathatha malunga neeyure ezingama-30-36 ukufika kwiqondo lobushushu elifanelekileyo.
Ncanda ingxowa yomkhenkce okanye amanzi abandayo kwitanki yentlanzi ukuthoba ngobunono ubushushu bamanzi. (Kulumkele ukuthoba iqondo lobushushu ngaphezu kwe-2 okanye 3 degrees F kwisithuba seeyure ezi-4.) Kuphephe ukubeka iityhubhu zomkhenkce ngokuthe ngqo kwi-aquarium yakho ngaphandle kokuba uzenze nge- reverse osmosis okanye amanzi ane-dechlorinated.
Ilungu Premium. Ndisebenzisa i-microwave ukufudumeza amanzi am okutshintsha amanzi, kakhulu rhoqo ebusika. Ilungile ngokugqibeleleyo.
Ngokuqhelekileyo, xa kuthethwa ngokukhetha ubushushu, intlanzi iya kuba kolunye lwezintlu ezintathu: Iintlanzi zamanzi abandayo: ngaphantsi kwe-68°F (20°C) iintlanzi zaseTropiki: 75-80°F (24-27°C) Intlanzi epholileyo. : Uluhlu olubanzi lwamaqondo obushushu, oluhlala lugqithana kwezi ndidi zingentla.
Ngokuqhelekileyo kufuneka uzive ufudumele, ewe.
Ukusebenzisa iThermometer yeNyama emanzini Ungayisebenzisa ukuqinisekisa ukuba okushiyekileyo kushushu ngokwaneleyo okanye ukujonga ubushushu bamanzi. Yintoni lento? Ukusebenzisa ithemometha yenyama ukujonga ubushushu bamanzi, faka nje iprobe yethemometha embizeni yamanzi kwaye ulinde imizuzwana embalwa ukuze ufunde ubushushu bokugqibela.
I-microwave iya konakaliswa yimitha ye-microwave njengoko ityuwa ingenako ukufunxa ubushushu obuninzi. Iibhloko eziqinileyo zetyuwa kunzima ukuziqhekeza ngenxa yokuba onke amanzi aya kulahleka.
Ngokungafaniyo neendawo ezihlala emanzini ashushu, akukho mfuneko yokuba unikeze isifudumezi kwitanki yakho yamanzi abandayo, nangona kunjalo, luluvo olulungileyo ukusebenzisa ithemometha, ngoko unokuqinisekisa ukuba igcinwe kwindawo entle epholileyo, ubushushu obungaguqukiyo kwintlanzi yakho. Kuya kufuneka uthenge isihluzo setanki yakho, kunye nesiciko, ukukhanya, kunye nekhithi yokuvavanya i-pH.
Nangona ezinye iintlanzi zithanda ubushushu obushushu, amanzi ashushu kakhulu anokuba yingozi kuyo nayiphi na intlanzi. Amaqondo obushushu aphezulu anyusa imfuno yeoksijini kwaye anciphise unikezelo lwayo. Njengoko amaqondo obushushu enyuka, ubutyhefu bamanzi busenokunyuka, njengoko izinto eziyityhefu ziya zinyibilika ngakumbi.
Amanzi abandayo abamba ioksijini eninzi kunamanzi ashushu, kwaye iintlanzi zasemanzini abandayo njenge goldfish zinemfuno ephezulu yeoksijini. Awuyidingi kwaphela, kodwa ukukhanya kwe-aquarium kuya kukhanyisa i-aquarium kwaye kubonise imibala yentlanzi. Kwaye ukuba ufuna izityalo eziphilayo ngokuqinisekileyo uya kufuna enye ngoko.
85F(29.4C) Amanzi aziva epholile kamnandi kunokufudumala.
Esinye isiphumo esisecaleni sokugcina iintlanzi zamanzi abandayo kumaqondo obushushu obutsha bufutshane kakhulu ubomi obuya kuvela ngenxa yokuba intlanzi isoloko igcinwe kumazinga aphezulu ngokungekho ngokwemvelo. Ngokugcina iintlanzi zakho zamanzi abandayo zipholile, ziya kunandipha ubomi obude, obunempilo.
Ithemometha intonga encamathela ecaleni kwetanki yindlela elula yokugcina unolwazi lobushushu, kwaye kufuneka ujonge ubushushu ngalo lonke ixesha ujonga itanki ukuze uqiniseke ukuba akukho zinguqu zingaqhelekanga. Iithemometha ezintywiliselwayo nazo ziyafumaneka kodwa zinokubiza kakhulu.
Iintlanzi zaseTropiki zezona ziKhetho zilungileyo kwabaQalayo Ewe, iintlanzi zetropikhi ziya kufuna ukuba amanzi azo agcinwe kwindawo ethile phakathi kwe-20-25 ° C ngokuxhomekeke kuhlobo, kodwa iintlanzi zetropikhi ziphantse zibe lubhejo olungcono kumntu oqalayo. Kutheni inje?Ngomhla we-9 kaMatshi, ngo-2021.
Lindela de amanqanaba e-ammonia kunye ne-nitrite avuke kwaye awele kwi-zero ngaphambi kokuba wongeze iintlanzi ezininzi. Ngokuqhelekileyo kuthatha malunga neeveki ezi-3-6 ukuba i-aquarium entsha ihambe kumjikelo wokuqala we-nitrogen, ngoko ke iintlanzi kufuneka zongezwe ezimbalwa ngeveki ngeli xesha.
Ingakanani i-Amoxicillin yentlanzi yeTanki ye-Aquarium yamanzi
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba ndinokongeza amanzi ashushu kwiTanki yeentlanzi
Umbuzo: Ndingasebenzisa Amanzi eTanki eentlanzi amadala kwiAquarium eNtsha
Ndingasongeza Amanzi ashushu kwiTanki yeentlanzi zeBetta
Ndingafaka Amanzi etephu ashushu kwiTanki yam yeentlanzi
Ndingasebenzisa itephu yamanzi ashushu kwiTanki yam yeentlanzi
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba iCatfish Intlanzi yamanzi afudumeleyo
Ngaba i-Goldfish Intlanzi yamanzi afudumeleyo
Ingakanani iGravel ye-Aquarium kwiTanki yeentlanzi
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba i-Fish Tank Water Conditioner yenza ukuba amanzi eTanki abe Murky